Wareegama isaan kafalan haala kanaan of dura qabu QEERROOn. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWareegama isaan kafalan haala kanaan of dura qabu QEERROOn.
Wareegama isaan kafalan haala kanaan of dura qabu QEERROOn. Kana waan beekuuf kan Dr. Abiy Qeerroo faarseef. Kuni hidhata cimaa qaba. Yeroo Wayyaaneen humna waraanaa abdattee obbo Lammaa fi Dr. Abiy of duuba deebisuuf carraaqan, isaan ammoo qeerroo abdatanii jara of duuba deebisuu danda’anii jiru.
Odeeffannoon suuta suutaan bahaa jirtu irraa wanti hubatamu, akka obbo Lammaa fi Dr. Abiy wareegamaaf of qopheessaniit aangoo Federaalaa tana dhuunfataniidha. Guyyaa dheengaddaa masara 4kilotti bakka Abbootiin Gadaa jiranitti dubbiin Dr. Abiy dubbates kanuma. Osoo dura taa’aa ADWUI ta’ee hin filamin dura gaafa guyyaan 5 hafu murtii hidhaatiin Dr. Abiy fi obbo Lammaa doorsifamaa turuu hime. Waltajjii sanirratti Qeerroos irra deebi’ee galateenfachaa ture jedhan. Kuni kan akeeku akka jarri hin kufne kan utube qeerroo ta’uu isaati. Qabsoon ammallee itti fufa. Tokkummaan wanti nuti hin moone hin jiru!
Kilta Jima is one of the government cabinet members in Gorodola district of Gujii zone who have been detained by the command post the night before for failing to take action against protesters.
Mormii Say #NoToMidrock ykn Midrock LAGADANBII haaronfamuu hin qabu jedhuun walqabatee halkan kaleemaleengeddaa magaalaa Haarqadhoo keessatti loltuu konkolaataa baayyee buusaniiru.
Namoonni baayyeen Kan hidhaman ta’us Kaabinoota aanaa keessaa itti -gafatamaa damee siyaasa siyaasa aanaa Gooroo Doolaa Kan ta’e Qilxaa Jimaa halkaniin qabanii reebanii akka deemaniin bakka buuteensaa akka hin beekkamane dhaga’ameera. Akka sababaatti Kan jedhame “uummata hiriira akka hin baane dhoowwuun irra ture. Inni uummata woliin hiriira baye Kan jedhu.” #FreeQilxaaJimaa and all others
Haasawa MM Dr. Abiyyi godhu keessatti kanin jaaladhe tokko, hattuudhaan hattuu jedhee waamuu isaati. Hattuun eenyu akka taate walumaan beeyna waan taheef maqaa dhahuun hin barbaachisu. Garuu hattuudhaan hattuu jechuun hojiidhaanis akka mul’atu hawwina. Kunis MIDROC dabalachuu qaba.